Xowliga Kobaca Garaadka iyo Jirka.
Sida caadiga ah waa ay isla socdaan xowliga kobaca garaadka iyo jirka balse waxaa jira mararka qaar in ay kala hormaraan .
Waxaa dhici karta in uu xowliga koriinka jiraka ka dheerayo midka garaadka , sida ay cadeeyeen culimida biology ga waxaa jira hormoon siidaayo dhacaan qofka jirkiisa koriyo, koriin ah xaga lafaha ama dhirirka hadii uu kabato dhacaankaas qofka jirkiisa sidii loogu talagalay waxaa dhacayso in uu qofkaas muuqaalka jirkiisa ka sareeyo garaadkiisa sidoo kale hadii uu ka yaraado dhacaankaas heerkii loogu talagalay waxaa dhacayso in uu qofka jirkiisa ka hooseeyo garaadkiisa .
Masalan waxaa lagayaabaa in aad aragto nin dheer oo gar leh oo koox ciyaal ah ku dhaxjiro oo laciyaarayo kadibna aad istiraahdo waa maxay ninka wayn ee caruurta ku dhex-jiro ma doqonbaa oo aad waliba u sii raaciso waa tii hore loo yiri NIN DHEER DHUG MALEH balse aragtidaas ma aha mid markastaa sax ah waayo waa uu joogsanayaa koriinka jirka marka uu gaaro da’da koriinka jirka ku joogsato kadibna uu ka daba yimaado garaadkii balse waa dhici kartaa in uusan ka daba imaan garaadka jirkiisa oo uu hoos yimaado maah mahaadii ahayd NIN DHEER DHUG MA LEH sidoo kale waxaa dhici karta in uu bato xowliga kobaca garaadka qofka kadibna uu yeesho muuqaal ilmo yar , marka aad aragto sida uu hadlayo iyo howlaha uu qabanayo in aad tiraahdo waa ilmo yar oo aad u caqli badan lakiin aragtidaa mar kasta sax ma ah sidoo kale qofkaasi uu hooseeyo koriinka jirkiisa waxa uu gaarayaa heer uu joogsado kobaca garaadka kadibna koriinkii jirka ka daba yimaado garaadkii balse waxaa dhici karta in uusan ka daba imaan kadibna qofkaa loogu yeero hebel oo waa COON .
Waxaajira garaad lagu kasbado barashada cilmiga kaa marnaba ku ma xirna hadba qofka inta ay da’diisa la egtahay balse waxa ay ku xiran yahay hadba qofka inta cilimi iyo khibrad kororsado.
Hadaba sida qofka marka la arko muuqaaliiksa loo qiyaaso garaadkiisa ayaa sidoo kale marka aad aragto maqaamka uu bulshada ka joogo qofka waxaa la qiyaasaa garaadkiisa .
Tusaale hadaad argato nin wayn oo ugu yaraan gar leh waxaad ku qiyaasaysaa in uu leeyahay garaadka sida caadiga ah ee ay leeyihiin dadka muuqaalkaas oo kale leh balse markaad aragto isagoo ku dhaxjira caruur yar yar ah walibana la cayaarayo isla markiiba waad kala noqonaysaa qiimayntii aad siisay . sidoo kale marka lagu yiraahdo hebal waa hogaamiye siyasadeed durbadiiba waxaa maankaaga ku soo dhacayo nin aad u garaad sareeyo oo bulsha oo dhan doonayo in uu ku qanciyo aragtidiisa uuna yahay nin u qalmo in uu hogaamiyo bulshada balse markaad argato hadaladiisa iyo ficiladiisa ayaad dib ugla noqonaysaa qiimaynta xaga gaardka ah ee aad siisay .Tusaale Muuse Suudi iyo Faysal Cali Waraabe waa labada nin ee ugu garaad liita hogaamiyaasha soomaalida ah ee kujira siyaasada . waayo labaadan nin waxa ay yiraahdeen labo oraah oo aan laga filanaynin in uu ku hadaaqo qof joogo maqaanka ay hada taaganyihiin inbadan oo soomaalida ka mid ah na waa ay kala noqdeen qiimayntii markii hore ay ku siiyeen .
Muuse Suudi waxa ay ahayd oraahdiisii C\_laahi kaba aan ku jin ahayn ayuu isku ciriirnayaa intaas kuma ekaysane waxa uu sii raaciyay ninmaan cidayda ahayna kabtaas ma gashan karto .
Muuse Suude hadii u ku ekeeysan lahaa C/laahi oo kaliya waa ay u haboonayd balse waxa uu soomaalida inteeda kale ka xaaraantimeeyay in ay xukunka wadanka qaban karaan .isagoo sidaa nacab iyo colaad ugu beeray soomaalidii kale ayuu hadana ka doonayaa in ay doortaan oo ay u dhiibtaan taladooda hadaba miyaanay taasi ahayn garaad yari ?.
Marka aan leeyahay Muuse waa nin garaad yar micnaheedu ma aha in uu guud ahaan nolasha ku garaad yar yahay oo waxaa lagayabaa in uu yahay nin kufilan dhaqashada reerkiisa. laakiin marka ay timaado maqaamka uu joogo iyo hadalada uu ku hadaaqo waxaan dhihi karnaa way kala sareeyaan garaadkiisa iyo maqaamka uu joogo .
Wax ceeb ah ma aha in aad beeshaada la jeclaato in ay xukunka ka qabato oo ay dadka cadaalad ku maamuulaan balse waxaa ceeb ah in aad tiraahdo xukunka waa ka xaraan cid aan reerkeena ahayn adoo waliba isku sheegayo nin siyaasi ah .
Faysal Cali Waraabe waxa ay ahayd oraahdiisa wiilka reer Hargaysa isma fahmi karaan wiilka reer Muqdisho balse waxaa is fahmi kara wiilka reer Hargaysa iyo wiilka reer Adisababa .
Faysal ma yaqaano cadawgiisa rasmiga ah oo waxa uu is barbardhigay qof aanba ogalayn jirtaankiisa iyo walaakii oo ay wadagaan dhalasho, dhaqan, Af iyo diin .
Faysal markii uu sheegtay in uu yahay siyaasi waxaa lagu qiimeeyay garaadkiisa in uu fahmi karo cadawgiisa rasmiga ah balse hada waa uu garan waayay sidaa darteed waxaan oran karanaa Faysal maqaamka uu joogo iyo garaadkiisa waa ay kala yaryihiin .
Sidoo kale Faysal howl walibaa kuma garaad yaro oo waxaa lagayaabaa in uu meelo kale ku fiicanyahay .